Fotoam-bita : Vahaolana maharitra ny hanomezana ny fahefana eny ifotony hiaro ny tany -
AccueilRaharaham-pirenenaFotoam-bita : Vahaolana maharitra ny hanomezana ny fahefana eny ifotony hiaro ny tany
07/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Olana iray eo anivon’ny fiarahamonina amin’izao fotoana ny tontolon’ny fananan-tany. Miezaka ny mamaha ireo olana samihafa sy manarina ny lesoka manodidina izany ny fitondrana ankehitriny, ary nasian’ny filoha resaka tamin’ny fotoam-bita izany. Vahaolana maharitra ny hanomezana ny fahefana eny ifotony hiaro ny taniny, araka ny fanamarihan’ny filoham-pirenena. « Lasa fangoronan-karena ny tany, indrindra ny aty an-tanàn-dehibe, mihamitombo ny fitadiavana tany atosiky ny tosika ara-toe-karena » hoy hatrany izy. Amin’ny ankapobeny dia maromaro ireo tranga miteraka olana eo amin’ny fananan-tany ka anisan’izany ny fisian’ny kolikoly eny anivon’ny sampandraharahan’ny fananan-tany, na eny anivon’ny fitsarana ka mahatonga ny titra tsy afaka hiaro akory ny tany. Ao ihany koa ny tsy fisian’ny fifanarahana, ny fahasarotan’ny fahazoana titra ho an’ireo tany navelan’ny voanjo nisy nanajary, ny tanim-panjakana, ireo tany manana sata manokana, ny tany natokana ho an’ny fampiasam-bola ho an’ny fambolena na ny ZIA… Miteraka olana ihany koa anefa ny resaka fifandovana na dia efa nisy aza ny ezaka nataon’ny fitondrana tamin’ny famindrana maimaimpoana ny lova. « Ianareo no tokony hamantatra ny momba ny tany mialohan’ ny hanomezana tsiny ny fitondram-panjakana, tsy ny fanjakana no mivarotra ny tany, fa miezaka isika mamaha ny olana, ary manarina ny lesoka », araka ny fanazavan’ny Filoha.
Nasian’ny filoha resaka ihany koa anefa ireo lalàna samihafa momba ny fampiasan’ny vahiny ny tany toa ny lalàna 2003-028 momba ny fifindra-monina, izay manome alàlana ny orinasa vahiny raha hampiasa vola mihoatra ny 500 000 Dolara, ny lalàna 2007-036 manome alàlana ny orinasa manana rantsana malagasy hividy tany, ary ny fampanofana tany ho an’ny vahiny mpampiasa vola hampiasa tany mihoatra ny 2500ha. « Miantso ny sampandraharahan’ny fananan-tany hamoaka ampahibemaso ny momba ireo tany midadasika novarotana, na nampanofaina nandritra ireo fotoana ireo, mba hazava ho an’ny rehetra », hoy hatrany ny Filoha.
Miafara eny amin’ny fitsarana matetika ny ady tany, ka nanaovan’ny Filoha antso avo ny fitsarana mba hitsara ny raharaha eny ifotony. Tafiditra amin’ny sehatra hanadaminana ny resaka fananan-tany ihany koa ny politika hitantanana ny tany, izay manome lanja ny fampihavanana ny malagasy amin’ny taniny. Aroso eny anivon’ny antenimiera ihany koa atsy ho atsy ny volavolan-dalàna hiarovana ny tany manana titra.
Amin’izao fotoana, kaominina 500 amin’ireo 1500 no manana birao ifoton’ny fananan-tany amin’izao fotoana. Tao anatin’ny herintaona dia maherin’ny 2 alina ny titra, ary kara-tany maherin’ny 3 alina no voazara. « Nofoanana ny didim-pitondrana manome alalana ny kaominina hivarotra tany latsaky ny 50ha hisorohana ny mety ho fihoaram-pefy », hoy hatrany ny fanazavan’ny Filoha.
Fetim-pirenena : Nisantatra ireo hetsika samihafa ny Carnaval de Madagascar
Raikitra amin’izay. Manomboka miditra tanteraka ao anatin’ny vanim-potoanan’ny fety ny Malagasy amin’ny fiatrehana ny fetim-pirenena. Nanomboka omaly ary nisantatra ireo hetsika samihafa ny « Carnaval de Madagascar », izay tanterahina eny amin’ny araben’ny fahaleovantena. Nanombohana ny hetsika ...Tohiny
Lalàn’ny fifidianana filoham-pirenena : Tsy afaka hirotsaka ireo kandida maloto
Olan’ny delestazy : Nandray fanapahan-kevitra ny filohampirenena